Mountain Television nation's first popular and leading analytical news channel. Mountain covers all the latest news from Nepal, Political News, Science news, Social news, Sport news, Ecomony news, Business, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actores, Audio, Video, Interview and many more. टेकुस्थित जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा रगत परीक्षण गराउनेकाे चाप – Emountain TV
काठमाडौं, २५ पुस । काठमाडौंको टेकुस्थित सरुवा रोग र महामारी अध्ययनका लागि बनाइएको राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा विरामीको चाप बढेको छ । नेपालको एकमात्र जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला काठमाडौंको टेकुमा रहेको छ । यहाँ सरुवा रोग र महामारी रोगको रगत परीक्षण गरिन्छ ।
दैनिक ८ सयदेखि एक हजार विरामी हरेक दिन रगत परीक्षणको लागि पुग्ने गर्छन । । रोगको अध्ययन गर्नका लागि निर्माण भएको यस ल्यावमा हरेक दिन बिभिन्न रोगका बिरामीहरु आफ्नो रगत परिक्षण गर्नका लागि आउने गरेको राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका निर्देशक डा.रुना झाले माउन्टेनलाई बताउनुभयो ।
रगत प्रयोगशाला निजी अस्पतालहरुमा पनि छन् । तर परीक्षणका लागि धेरै महँगो हुने गरेपछि सर्वसाधारणको रोजाई टेकु नै हुने गर्छ । रोगको सही पहिचानका लागि टेकुको प्रयोगशालालाई भरपर्दो मानिन्छ ।
अन्यत्र गर्दा प्रयोगशालापिच्छे फरक–फरक रिपोर्ट आउने गरेको सर्वसाधारणको गुनासो छ । सही रिपोर्ट नआउने र जथाभावी मनमरी रुपमा ल्यावले बिरामीसँग रकम असुल्दा बिरामीहरु राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालमा आउने गरेको बताउँछन ।
हरेक बर्ष अनाधिकृत रुपमा खुलेका ल्यावहरुका कारण र नेपालमा राम्रो ल्याव परिक्षण उपकरण नहुँदा बिभिन्न रोगको पहिचान हुन सकेको छैन जसका कारण करोडौ रकम बाहिर जाने गरेको छ ।
यसैलाई मध्यजनर गर्दै राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालालाई सबै प्रदेशमा निमार्णको तयारी भैरहेको निर्देशक डा.झाले बताउनुभयो ।
यस प्रयोगशालामा नेपालभरबाट नै बिरामी रगत परिक्षण गर्नका लागी आउने गरेको पाइन्छ । दिनमा ८ सय देखि १ हजारसम्मले रगत परिक्षण गर्नका लागि आउने गरेका छन् ।
परीक्षण गर्नेको संख्या हरेक बर्ष दोव्वरको दरले बढिरहेको छ । विरामी बढ्दो र जनशक्ति कम हुँदा प्रयोगशालाले सेवा छिटो दिन सकिरहेको छैन ।
राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका अनुसार ‘ए’ वर्गमा सात, ‘बी’ वर्गमा २९ वटा, ‘सी’ वर्गमा १ सय ९६ वटा र ‘डी’ वर्गमा ५९ वटा ल्याब दर्ता भएका छन् । देशभरका अधिकांश प्रयोगशालाले न्यूनतम मापदण्ड पूरा नगरेको पाइएको छ ।
यसकारण, ल्याबको गुणस्तरीयतामाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ । फार्मेसीपिच्छे ल्याब भए पनि कतिपय ल्याब दर्ता नभइ अनधिकृत रूपमा सञ्चालन भइरहेका छन् । जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका अनुसार देशभर ४ हजार ५ सय वटा ल्याब छन् ।